तपाईं को आजको राशीफल (शनिबार) – तपाईं सबै को दिन शुभ र मंगलमय -
२०७५, ६ आश्विन शनिबार १०:१९ September 22, 2018 clickonLeaveaComment on तपाईं को आजको राशीफल (शनिबार) – तपाईं सबै को दिन शुभ र मंगलमय
तपाईंको साँझले तपाईंलाई तनाउयुक्त राख्न सक्ने मिश्रित भावना दिनेछ। धेरै चिन्ता गर्ने तर कुनै आवश्यकता छैन – किनकि खुशीले तपाईंलाई निराशाले भन्दा बढी आनन्द दिनेछ। आर्थिक सुधार निश्चित छ। दिनको पछिल्लो भागको अनपेक्षित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारको लागि आनन्द र खुशी ल्याउँछ। प्रेममा हतार नगर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई जानीबुझी हानि पुर्याउन सक्छ, जसले तपाईंलाई केही समय दुखी राख्न सक्छ।
द्वन्द्वबाट जोगिनुहोस् किनकि यसले तपाईंको रोग अझै बढाउन सक्छ। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। भान्साको लागि आवश्यक वस्तुहरूको खरिदले तपाईंलाई साँझमा व्यस्त राख्नेछ। तपाईं आफ्नो प्रेमीले गरेको कुराले अत्यधिक संवेदनशील हुनुहुनेछ – तपाईंले आफ्नो भावना नियन्त्रण गरेर स्थिति अझै बिगार्न सक्ने केही गर्नबाट जोगिन आवश्यक छ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। आफन्तहरूले आज तपाईंको जोडीसित तर्क गर्न सक्छन्।
आराम गर्नको लागि घनिष्ठ मित्रहरूसँग केहि समय बिताउनुहोस्। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। बच्चाको अध्ययनलाई लिएर चिन्ता गर्न आवश्यक छैन। अहिलेको क्षणमा तपाईंले केही समस्याको सामना गर्नुपर्छ तर यी क्षणिक हुन र केही समयमा मरिहाल्ने छन्। तपाईंको प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन्। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। आफ्नो साथीमा शङ्का गरेकोले ठूलो लडाई हुन सक्छ।
तपाईंको कम जाँगरले प्रणालीमा दीर्घकालीन विष जस्तै काम गर्नेछ। आफैलाई केही रचनात्मक काममा संलग्न गरेर रोग विरुद्ध लड्ने उत्प्रेरणा बनाइ राख्नु उचिह हुनेछ। आज तपाईंको समर्पण र मेहनतले पहिचान पाउनेछ र तपाईंको लागि केहि आर्थिक इनाम ल्याउनेछ। हाल तपाईंको व्यक्तिगत जीवन तपाईंको ध्यानको प्रमुख कारण भएको छ – तर आज तपाईं सामाजिक काम, दान र तपाईंसँग समस्या लिएर आउनेहरूको मद्दत गर्नमा केन्द्रित हुनुहुनेछ। विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
आफ्नो शारीरिक तन्दुरूस्ती कायम गर्नको लागि तपाईंले आज केही खेल गतिविधिहरूको आनन्द लिने सम्भावना छ। लामो अवधिको दृष्टिले लगानी गरिनु आवश्यक छ। तपाईंले भरोसा गरेको कसैले तपाईंलाई पूर्ण सत्य नभनेको हुन सक्छ – तपाईंको अरूलाई विश्वस्त गर्ने क्षमताले आउने समस्याहरूको समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंले आफ्नो प्रियलाई उनको पछिल्लो भावशून्यताका लागि क्षमा गरेर आफ्नो जीवन लायक बनाउनु हुनेछ। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आफ्नो परिवारका साथ गरेको सामाजिक गतिविधिले सबैलाई तनाउमुक्त र सुखद मुडमा राख्ने थियो। तपाईंले प्रेम सम्बन्धमा गलत बुझ्ने सम्भावना छ। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। तपाईंको जोडी अरूको प्रतिकूल प्रभावमा फँस्न सक्छ र तपाईंसँग झगडा गर्नेछ, तर तपाईंको प्रेम र दयाले सबैलाई मिलाउनेछ।
आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। ब्याङ्कका कामहरूमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ। परिवारमा तपाईंको हावी मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न सही समय हो। जीवनको राम्रो र नराम्रो कुराहरू बाँट्न तिनीहरूसँग घनिष्ठ सहयोगमा काम गर्नुहोस्। तपाईंको परिवर्तित मनोवृत्तिले तिनीहरूलाई असीमित आनन्द दिनेछ। आफ्नो प्रियसँग वनभोजमा गएर आफ्नो बहुमूल्य समयलाई पुनर्जीवित गर्नुहोस्। तपाईंको प्रतिस्पर्धी प्रकृतिले तपाईं प्रवेश गरेको कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सक्षम गराउनेछ। तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
रक्तचाप विरामीहरुले खासगरी आफ्नो स्वास्थ्यको अतिरिक्त ध्यान राख्नुपर्छ। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। तनाउको समय हुन सक्छ तर परिवारको समर्थनले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध आज राम्रो हुने छैन। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। आफ्नो जोडीको मागले तपाईंलाई केही तनाउ दिन सक्छ।
तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। शंकास्पद वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट सावधान रहनुहोस्। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईंले उनीहरूलाई ध्यान दिनुहुँदैछ भन्ने महसुस गराउन उनीहरूको आनन्द र दुःखमा आफैलाई संलग्न गराउनुहोस्। तपाईंका आँखा आफ्नो प्रेमीको अँध्यारो रातलाई प्रकाश गर्न सक्ने उज्ज्वल छन्। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। तपाईंको वैवाहिक जीवनको यो सबैभन्दा राम्रो दिन हुने छ। तपाईंले प्रेमको साँचो परमानन्द अनुभव गर्नु हुनेछ।
धेर खाने र उच्च क्यालोरी भएको आहार नगर्नु उचित हुन्छ। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। तपाईंले आज प्रेम गर्ने मौका गुमाउनु भएन भने, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा कहिल्यै तपाईंले यो दिन बिर्सन सक्नु हुनेछैन। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। आँखाले सबै कुरा भन्छ, र आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित आँखा जुदाएर भावनात्मक बातचीत गर्नु हुनेछ।
प्रकृतिले तपाईंलाई उल्लेखनीय विश्वास र बुद्धि प्रदान गरेको छ – त्यसैले यसको उत्तम प्रयोग गर्नुहोस्। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो सामाजिक जीवनलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट केही समय निकाल्नुहोस् र आफ्नो परिवारसँग पार्टीमा जानुहोस्। यसले तपाईंको दबाब मात्रलाई राहत दिंदैन, हिचकिचाहट पनि हटाउँछ। तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज सबै खुसी देखिन्छ।
राम्रो जीवनको लागि आफ्नो स्वास्थ्य र समग्र व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको अव्यावहारिक योजनाले धनको कमी गराउनेछ। आफ्नो जीवन साथीको लापरवाहीले सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। आफ्नो बहुमूल्य समय खर्च गर्नुहोस् र आफ्ना खुसीका सुनौला दिनहरू पुनः प्राप्त गर्न आफ्ना रमाइला सम्झनाहरु याद गर्नुहोस्। तपाईंले आज आफ्नी सपनाकी राजकुमारी भेटेकोले तपाईंका आँखा आनन्दले प्रकाशित भए र मुटुको धडकन पनि छिटो भयो। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।
रबी वोड र दुर्गा खरेल को नया गित “घरमा कुरा” मा प्रियन्का कार्की र आयुशमान देशराज [भिडिओ]
२०७६, १५ असार आईतवार ०१:४४ June 30, 2019 clickon